Sida loo keydiyo Tamarta & loo yareeyo qashinka kireyste ahaan - Xarunta EcoTechnology
Dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan sameyno qeybteena si aan u yareyno raadkeena kaarboonka si uun, laakiin markii aadan laheyn guri kuu gaar ah, maxaad sameyn kartaa si aad uga caawiso? Waxaan diyaarinay 3 shey oo deg deg ah oo kireystayaashu sameyn karaan si ay ugu noolaadaan si isdaba joog ah isbadalna u yeeshaan!
Hel Qiimeynta Tamarta Guriga
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo keydinta tamarta ayaa ah inaad jadwal u sameyso Qiimeynta Tamarta Guriga (HEA) midkoodna Badbaadinta, ama Adeegyada Ka Hortagga Khasaaraha Tamarta (CAAWIMO) haddii aad ku nooshahay magaalo leh yutiilitikada dawladda hoose. Haddii aad bixiso biil koronto ee gobolka Massachusetts, waad u-qalantaa HEA. Nidaamkani wuxuu ku lug leeyahay in khabiir xagga tamarta ahi u yimaado gurigaaga, ama uu kula kulmo gebi ahaanba, oo uu qiimeeyo halka gurigaaga ka mid ah (kireysan ama iska leh) fursadaha keydinta tamarta. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad keydiso tamarta, hagaajiso raaxada, iyo inaad yareyso qarashka korontada. In kasta oo aad heli karto HEA bilaash ah adiga oo aan ogolaansho ka helin milkiilaha gurigaaga, haddana waa fikrad fiican inaad iska xaadiriso mulkiilahaaga kahor intaadan bilaabin howshan.
Inta lagu jiro HEA, waxaad heli doontaa tallaabooyin badbaadin degdeg ah oo aan qiimo lahayn. Tan waxaa ka mid noqon kara waxyaabaha ay ka mid yihiin nalalka nalalka ee loo yaqaan 'LED light', fallaadho koronto oo horumarsan, madaxyo qulqulaya oo qulqulaya, iyo inbadan. Kuwaas oo dhami waxay sababi karaan kordhinta keydinta tamarta bil kasta!
Khabiirkaaga tamarta ayaa badanaa kugula talin doona hagaajinta tamarta ee lagu sameyn karo qaab dhismeedka gurigaaga. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan ku darin daboolida ama hagaajinta qalabka waaweyn ama qalabka HVAC, mulkiilahaagu wuxuu u baahan doonaa inuu ku lug yeesho nidaamka oggolaanshaha iyo isuduwidda.
Intaa waxaa sii dheer, kaliya macaamiisha ku nool guri ka kooban 1-4 qaybood ayaa xaq u leh degenaanshaha HEA. Haddii aad ku nooshahay dhismo leh in ka badan shan qaybood, waxaad u gudbin kartaa mulkiilahaaga dhismaha ama maareeyaha dhismaha Barnaamijka CET ee qoysaska badan ama wac 855-472-0318. Macaamiisha ku nool dhismayaasha leh in kabadan 1-4 cutub ayaa wali xaq u leh tallaabooyinka kaydinta degdegga ah iyo faa'iidooyinka kale ee barnaamijka. Isku dubaridka ururkaaga kondho ama maareeyayaasha guryaha si aad u bilowdo. La xiriir utility-gaaga ama Mass Save si aad wax badan uga barato sida aad ku heli karto tallaabooyinkan badbaadinta tamarta.
Si aad jadwal ugu sameyso HEA, waxaad wici kartaa Mass Save oo ah 866-527-7283, HELPS 888-333-7525, ama buuxi Foomka Xiriirka Qiimeynta Tamarta Guriga ee CET.
U beddelo Tamarta Cusboonaysiinta
Kireyste ahaan, waxay u badan tahay inaad bixiso nooc ka mid ah korontada. Haddii aad bixiso lacagta korontada, kala hadal shirkadda adeeg bixiyahaaga sidii aad ugu beddeli lahayd tamarta la cusboonaysiin karo, ama booqo websaydhka magaaladaada si aad u aragto waxa ay bixin karaan. Magaalooyin badan ayaa bixiya Isku-darka Xulista Bulshada, taas oo kuu oggolaaneysa inaad ku iibsato tamarta la cusboonaysiin karo biilkaaga korontada ee hadda jira, oo badanaa leh keyd illaa 10%.
Ikhtiyaar kale oo loogu talagalay dadka deggan New England waa Isbahaysiga Macaamiisha Green Energy Barnaamijka Green Powered. Xulashadani waxay u dhigantaa isticmaalkaaga korantada tamar la cusboonaysiin karo si loo hubiyo in iibsashadaadu ay run ahaantii gacan ka geysaneyso helitaanka tamar badan oo dib loo cusboonaysiin karo oo ku saabsan shabakadda korantada. Waxaa jira kharash yar oo bille ah oo dheeri ah, kaas oo lagu maalgeliyo horumarinta kaabayaasha tamarta la cusbooneysiin karo ee gobolka. Lacagta billaha ah ee barnaamijkan ayaa ah mid federaal ahaan looga jari karo.
Si kastaba ha noqotee, ka taxaddar bixiyeyaasha beddelka ah ee laga yaabo in aysan dhab ahaantii siin tamarta cagaaran sidii loo ballanqaaday. Tani article oo ka socda Bulshada Audubon Society waa kheyraad aad u wanaagsan oo lagu sameeyo wareejinta caqliga ah ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xulashooyinka gobolka oo dhan iyada oo loo marayo Isbahaysiga Mareykanka ee Shirkadaha Tamarta Tartanka.
Hab kale oo kireystayaasha ugu beddelan karaan tamarta la cusboonaysiin karo ayaa ah iyada oo la marayo qoraxda bulshada, taas oo u oggolaanaysa dadka lacagta bixiya inay ku biiriyaan shirkadaha bixiya tamarta qoraxda ee dalka laga leeyahay. Waxaad ka heli kartaa liiska bixiyeyaasha qoraxda bulshada ee Massachusetts halkan.
Kala xiriir CET taleefanka 413-341-0418 ama cet@cetonline.org si aad wax badan uga barato xulashooyinka tamarta la cusboonaysiin karo.
Compost si loo Yareeyo Qashinka
Qaab kale oo aad ugu yeelan karto saameyn togan deegaanka gurigaaga ayaa yareyneysa qashinkaaga! Mid ka mid ah hababka ugu fudud ee tan lagu sameeyn karaa waa iyadoo la iskudaro qashinka cuntadaada. Si tan loo fududeeyo, iyo in urta hoos loo dhigo, haraaga cuntadaada ku hayso bac boorso bunni ah ama Qashin aruuriyaha jikada kuna keydi qaboojiyahaaga. Marka boorsadaadu buuxsato, raadi goob lagu rido oo aad ku beeran karto. Qashin la'aan waa ilo aad u fiican oo kaa caawin kara inaad hesho meel kuu dhow. Waxa kale oo jiri kara adeegyo uruurinta compost ee deegaankaaga. Shirkadahaani waxay ku soo ururin doonaan qashinkaaga dabiiciga ah qashinka ay bixiyaan, qaarkoodna xitaa waxay soo celiyaan haamaha ay ka buuxaan compost-ka la dhammeeyay ee aad isticmaali karto!
Haddii aysan jirin meelo laga tago ama adeegyada laga qaado ee kuu dhow, markaa waad isku dayi kartaa Vermicomposting! Tani waa hab fiican oo lagu beero gudaha gurigaaga iyadoo la kaashanayo gooryaanka. Gooryaanka gorgor-jeex jeexjeexa ayaa haraagaaga cuntada ugu rogi kara bacrimin qashin qubka gudaha ah. Wax soo saarkan la dhammeeyey wuxuu ku siin doonaa wax ka beddelka ciidda oo kaa caawin kara cawskaaga, beertaada, iyo dhirta inay koraan oo ay kobcaan.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa a foosto combid qoraxda, haddii aad leedahay meel bannaan oo shaqsiyeed! Tani waxay u baahan tahay dadaal dheeri ah, laakiin waxaad helaysaa abaalmarinta abuurista nafaqeyntaada ee sariiraha ubax ama dhirta dheriga ah.
Si aad u sii waddo yareynta raadadka kaarboonkaaga ahaan kirayste, tixgeli tillaabooyinkan kale ee fudud:
Ku qallaji dharkaaga adoo isticmaalaya sagxad qalajinta halkii aad ka isticmaali lahayd qalajiyaha. Dharka qalajiyaha ayaa mas'uul ka ah ku saabsan 6% celceliska isticmaalka tamarta guriga. Hawo qalajinta dharkaaga ayaa yareyn doonta raadadka kaarboonka qoyska 2,400 rodol sanadkii.
Adeegso xarig koronto xariif ah si aad qalabkaaga ugu xirtid. Marka aaladaha aan la isticmaalin oo ay ku jiraan xaalad heegan ah, xariijimahan korantada casriga ah way awoodaan korontada ka goo oo dhali tamar kayd.
Isticmaal heerkulbeeg barnaamijka lagu kaydin karo si aad u badbaadiso tamarta iyo lacagta. Sida laga soo xigtay Energy Star, markii si habboon loo isticmaalo, heerkulbeeg barnaamijka lagu keydin karo ayaa badbaadin kara qiyaastii $ 180 sanadkii.
Ku beddel nalalkaaga iftiinka leh nalalka LED-ka. Nalalka LED-ka ayaa adeegsada 75% tamar yar marka loo eego iftiinka dabka.
Boorsooyinkaaga wax iibsashada ee dib loo isticmaali karo horay u sii qaado markii aad aadayso dukaanka.
Isticmaal calalyo halkii aad ka isticmaali lahayd tuwaallo warqad ah si aad u yarayso qashinka. Tuwaal waraaqo la tuuray ayaa keenaya 254 million tan qashinka sanad walba adduunka. Tixgeli mid kale beddelka dib loo isticmaali karo inuu kaa caawiyo inaad yareyso qashinka.
Haddii aad raadineyso gaari cusub, tixgeli inaad u cusbooneysiiso gaari koronto ku shaqeeya. Waxaa jira barnaamijyo kala duwan oo kaa caawin kara inaad u cusbooneysiiso qiimo dhimis, sida Ku wad Green barnaamijka ka socda Isbahaysiga Macaamiisha Green Energy.